Herin'ny hydraulic: fandidiana, tombony ary fatiantoka | Fanavaozana maintso
Androany izahay dia niresaka momba ny angovo azo havaozina izay anisan'ny be mpampiasa indrindra. Momba izany herinaratra hydraulic. Karazana karazana madio herinaratra afaka manova ny angovo mety ho hery misintona izay ananan'ny rano iray lasa angovo elektrika. Eto isika dia hanazava tsikelikely ny fomba hitrangan'ity angovo ity sy izay atao hanararaotana azy.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny angovo herinaratra ianao? Mila manohy mamaky fotsiny ianao 🙂
1 Inona no atao hoe angovo hydraulic?
3 Zavamaniry mandeha amin'ny rano mandeha amin'ny herinaratra
4 Tavoahangy mandeha amin'ny herinaratra
5 Toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
6 Tantaran'ny herinaratra
Inona no atao hoe angovo hydraulic?
Andao atomboka amin'ny fanondroana indray fa marina izany loharano azo havaozina sy madio tanteraka. Misaotra azy io fa afaka mivoaka ny herinaratra raha tsy mandoto na mampihena ny harena voajanahary. Ity angovo ity dia manandrana manova ny angovo mety ho gravitational izay ananan'ny rano iray ho fisondrotan'ny angovo kinetika handresena ny fahasamihafana eo amin'ny haavony. Ny angovo mekanika azo dia azo ampiasaina mivantana hanetsehana ny vatan'ny turbinina hiteraka angovo herinaratra.
Madio tanteraka io karazana angovo io satria avy amin'ny renirano sy farihy. Ny famoronana tohodrano sy lakandrano noterena dia nampitombo be ny fahafaha-manao sy ny fahafahan'ny famokarana herinaratra. Izany dia satria Afaka mitahiry rano be dia be izy ary mampiasa azy ireo hiteraka angovo.
Betsaka ny karazana famokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra. Ny voalohany dia hita any amin'ny faritry ny tendrombohitra. Manararaotra ny avo dia mifantoka amin'ny fanaovana hitsambikina amin'ny haavon'ny fahalavoana izy ireo. Ny karazan-javamaniry hafa dia rano tsiranoka ary ampiasaina izy ireo ranon-drano lehibe izay mandresy ny fahasamihafana kely amin'ny haavony. Azo lazaina fa mamokatra angovo bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy ary ny faharoa mamoaka azy tsikelikely.
Ny rano ao anaty farihy na lozika artifisialy dia entina midina mankany amin'ny alàlan'ny fantsona. Amin'izany no ahafahana manova ny angovo mety ho tsindry ary Angovo kinetika misaotra ny mpaninjara sy ny turbine.
Ny angovo mekanika dia miova amin'ny alàlan'ny mpamokatra herinaratra noho ny fisehoan'ny fampidirana elektromagnetika. Toy izao no ahazoanao herinaratra. Natsangana ny tobin'ny paompy hitahirizana angovo ary noho izany dia misy amin'ny fotoana ilana fitakiana betsaka indrindra. Araka izay azo atao ny mamakafaka, rafitra fitehirizana ny angovo azo havaozina dia fetra amin'ny fandrosoany.
Zavamaniry mandeha amin'ny rano mandeha amin'ny herinaratra
Ao amin'ireo zavamaniry hydroelectric pumped, ny rano dia ampiakarina anaty tanky any ambony hampiasa ny angovo vokarina ary tsy ilaina amin'ny alina. Amin'izany, mandritra ny andro izay lehibe indrindra ny fangatahana herinaratra, misy rano fanampiny azo omena. Ny rafitry ny paompy dia manana tombony amin'ny famelana ny angovo hotehirizina amin'ny fotoana misy, azo ampiasaina amin'ny fotoana ilana izany.
Na dia manana tombony be dia be aza ny angovo tsy mandoto, ny fanamboarana tohodrano sy fantsakana lehibe dia miteraka fiatraikany amin'ny tontolo iainana. Tsy ny fanamboarana tohodrano intsony, fa tsy ny fitahirizana artifisialy, ny tondra-drano amin'ny tany midadasika sns. Manimba ny fanjakan'ny tontolo iainana voajanahary izy ireo.
Tavoahangy mandeha amin'ny herinaratra
Izy io dia ampiasaina hanangonana ny rano amin'ny renirano. Loharano artifisialy izy io izay manangona rano. Ny singa fototra ao aminy dia ny tohodrano. Misaotra ny tohodrano, tratra ny haavony ilaina mba hahafahan'ny rano ampiasaina taty aoriana noho ny tsy fitovian'ny haavony.
Hatrany amin'ny koveta ka hatrany amin'ny toby fametrahan-jiro misy ny mpamokatra herinaratra dia misy lakandrano voatery. Ny tanjon'izy ireo dia ny manome ny hafainganam-pandehan'ny lelan'ny turbine. Ny fanokafana voalohany dia midadasika kokoa ary tery ny fivoahana hampitombo ny hery ivoahan'ny rano.
Toeram-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
Ny toby famokarana herinaratra dia iray manana andiana injeniera elektrika napetraka ao anatin'ny nifandimby. Ny tanjon'ny masinina dia ny fiomanana hahazoana famokarana herinaratra amin'ny angovo hydraulic. Ny rano dia entina amin'ny turbine iray na maromaro izay mihodina noho ny faneren'ny rano. Ny turbine tsirairay avy dia ampifandraisina amin'ny alternator izay tompon'andraikitra amin'ny fanovana ny fivezivezena mihodina ho angovo herinaratra.
Ny iray amin'ireo lesoka ankoatry ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana vokarin'ny fananganana tohodrano dia ny tsy fitohizan'ny famokarana angovo. Tokony ho ao an-tsaina fa ny famokarana angovo azo havaozina dia miankina mivantana amin'ny natiora. Noho izany, ny famatsian-drano ao amin'ny fantsakan-drano artifisialy dia hiankina, avy eo an'ny fitondrana any amin'ny renirano. Raha vitsy ny rotsakorana any amin'ny faritra iray dia tsy hahomby firy ny famokarana angovo.
Fomba fanao any amin'ny firenena sasany ny manondraka rano ao anaty fitoeram-pamokarana herinaratra amin'ny alina. Vita izany satria misy mihoatra ny angovo ary ampiasaina indray ny angovo hydraulic voatahiry mandritra ny andro. Rehefa avo ny fangatahana herinaratra dia miakatra koa ny vidiny. Noho izany dia mahazo tombony azo ianao ary mitahiry angovo herinaratra.
Ny voalohany nampiasa an'io karazana angovo io dia ny grika sy ny romana. Tamin'ny voalohany dia nampiasa angovo azo havaozina izy ireo mba hampandehanana ireo fikosoham-bary hitroka katsaka. Rehefa nandeha ny fotoana dia nivoatra ny ozinina ary nanomboka nampiasa ny angovo ananan'ny rano ny kodiarana rano.
Tamin'ny faran'ny vanim-potoana antenantenany dia nampiasaina ny fomba hafa hitrandrahana angovo hydraulic. Momba ny kodiarana hydraulic. Nampiasain'izy ireo amin'ny fanondrahana ny saha sy amin'ny fanarenana ireo faritra heniheny. Ny kodiarana rano dia mbola ampiasaina ankehitriny amin'ny fikosoham-bary sy amin'ny famokarana herinaratra.
Manodidina ny revolisiona indostrialy faharoa ny kodiarana rano nivoatra ho turbine rano. Izy io dia masinina izay namboarina tamin'ny alàlan'ny kodiarana castor tamin'ny famaky. Miaraka amin'ny fanavaozana teknolojia lasa tonga lafatra sy miasa.
Ny turbine dia nanatsara ny fahombiazan'ny fiovan'ny angovo mety ho an'ny rano ho lasa angovo kinetika mihodina ary napetaka amin'ny zana-kazo.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka nianatra zavatra bebe kokoa momba ny angovo azo havaozina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » angovo hydraulic » Angovo hydraulic